जिओर्डानो ब्रुनोको जीवनी। तिनीहरूको खोज र ईतिहासको बारेमा जान्नुहोस् नेटवर्क मौसम विज्ञान
पुरानो समयमा त्यहाँ मानिसहरु थिए जो विकासलाई विश्वास गर्दैनथे र केहि चीजहरुको खोजमा विश्वास गर्दैनथे। पहिले देखि नै स्थानमा के थियो र जे सत्य हो भनेर विश्वास गरिएको थियो त्यो परिमार्जन गर्दा रातारात परिवर्तन हुन सक्दैन किनकि नयाँ व्यक्तिले भनेको हो कि हो। यो के भयो जिओर्डानो ब्रुनो पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्र थिएन भन्ने तथ्यको बारेमा जनसंख्याको विरोधाभासको लागि।
यस लेखमा, हामी जिओर्डानो ब्रुनोलाई के भयो र तिनका कारनामहरू के थिए भनेर वर्णन गर्न जाँदैछौं।
1 जिओर्डानो ब्रुनो को थिए?
2 जीवनमा समस्याहरू
3 आफ्नो समय भन्दा अगाडि विचारविज्ञान
4 जिओर्डानो ब्रुनोको अन्त्य
जिओर्डानो ब्रुनो को थिए?
यो एक त्यस्तो व्यक्तिको बारेमा हो जसले आफ्नो जीवनको अधिकांश भाग दर्शन र धर्मशास्त्रमा समर्पित गर्थे। उहाँ धेरै धार्मिक हुनुहुन्थ्यो र कविता र नाटक पनि लेख्नुहुन्छ। उहाँ नोला नेपोलमा १ 1548apXNUMX मा जन्मनुभएको थियो। उनलाई पवित्र इन्क्विजिसनले मृत्युदण्ड सुनायो किनकि उनले चर्चको बिरूद्ध एक खुलासा गर्ने काम गरे, र उनले भने कि पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्र होइन।
आज हामीलाई थाहा छ, हाम्रो ग्रह लाई सम्बन्धित छ सौर्य प्रणाली, other अन्य ग्रहहरु मिलेर बनेको छ जुन सूर्यको वरिपरि आफ्नो कक्षामा छन्। १ 1548 मा ब्रह्माण्डमा हाम्रो स्थिति जान्न त्यस्तो कुनै प्रविधि थिएन। मानव जहिले पनि भएको छ, तिनीहरूले आत्म-केन्द्रित पाप गरेका छन् र, निस्सन्देह, यस अवस्थामा हामी विश्वास गर्छौं कि हामी सबै कुराको केन्द्र हो। जियर्डानो ब्रुनोलाई मृत्युदण्ड सुनाईयो र केहि दिन अघि, पोप क्लेमेन्ट सातौंले उसलाई आफ्नो विचार त्यागेर पश्चाताप गर्ने अवसर दियो।
कथा यो छ कि ब्रुनो खम्बामा जलाएर समेत आफ्नो विश्वास त्यागिएन। ऊ अन्त सम्म आफ्नो आदर्शहरुमा दृढ थियो। अब यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि एक जना मानिस, जसको खोजी आफ्नो समयको लागि उन्नत थियो, मानव स्वार्थ र चर्चले निर्दयतापूर्वक हत्या गरेको थियो।
उसको समस्याहरू कहिलेदेखि सुरु भएको थियो उनले रोटरडमको डच दार्शनिक डेसिडेरियस इरास्मसको निषेधित पाठहरू पढ्ने आँट गरे। यो वर्ष १ 1575 in मा भयो र त्यस क्षणदेखि ब्रुनो सुर्खाहरूमा राखियो। यो उनका समस्याहरूको सुरुवात मात्र हो। सानैदेखि उनको विश्वास चर्चको लागि खतरनाक थियो किनकि उनको ईश्वरशास्त्र बुझ्ने तरिका थियो। ब्रुनोले एक धार्मिक व्यक्ति भए पनि पृथ्वीको बारेमा भन्ने कुरा सुनेर अधिक धार्मिक समुदाय असन्तुष्ट भए।
उसको उमेरका लागि बिभिन्न विश्वासहरू दिईएको (जुन अन्तमा सत्य हो भनेर पत्ता लगाइएको छ), भनिन्छ कि जियोर्डानोलाई धार्मिकले कहिल्यै स्वीकारेन। उनी पादरीको रूपमा नियुक्त भए र उनलाई विधर्मी भएको आरोप लगाइएको थियो। यसका कारण उसले अर्डर छोड्नुपर्‍यो र बाहिर निकाल्नुपर्‍यो। पछि उनले क्याल्भिनवादमा परिवर्तन गरे, यद्यपि उनको आलोचनात्मक विचारहरूले उनको द्रुत कारागारमा लग्यो।
ब्रुनोलाई धर्मले स्वीकार नगर्ने आदर्श वा मान्यता भएको कारण अन्वेषणले गर्दा सताएको मात्र होइन, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न र विश्वमा शान्ति ल्याउन खोज्ने व्यक्तिहरूले विभिन्न बौद्धिक क्रुर आक्रमण गरेका थिए।
आफ्नो जीवन भर, केवल उनी लन्डन, पेरिस र अक्सफोर्डमा रहेका वर्षहरूमा वास्तवमै खुसी थिए र केही शान्तिको प्रबन्ध गरे। त्यहाँ केवल उसले आफ्नो सीपहरू राम्रोसँग विकास गर्न सके, विभिन्न धर्मशास्त्रका लेखकहरूको ख्याती कमाए।
उनले विज्ञान र हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त निकोलस कोपर्निकस र सौर प्रणाली। यी सिद्धान्तहरू पनि अन्वेषण द्वारा लगातार धम्कीमा थिए र यसलाई ग्यालिलियो ग्यालिलिले समर्थन गरेको थियो।
आफ्नो समय भन्दा अगाडि विचारविज्ञान
र त्यहाँ मानिसहरु छन् जो आफू बाँचिरहेको समयको लागि धेरै उन्नत छ। स्टेट युनिभर्सिटीको साओ पाउलो (यूएनईएसपी) का भौतिक विज्ञान विभागका एक प्राध्यापकले रोडोल्फो लान्गी नामक ब्रुनोलाई विश्व ब्रह्माण्डको केन्द्र थियो भन्ने तथ्यलाई ब्रुनोलाई थाहा छ र समर्थन गरेको कुरा बताए। त्यो भन्दा पनि, उसले आफूले सिकेको कुराको आधारमा विभिन्न सिद्धान्तहरू विकास गरेको थियो। उनले पुष्टिकरण गरे कि ब्रह्माण्ड असीमित थियो र यसको एकल केन्द्र थिएन जस्तो हामीलाई थाहा छ। त्यो हो, त्यहाँ पृथ्वी जस्ता बढी बसोबास संसारहरू थिए र ग्रहहरूको प्रत्येक समूह आफ्नो केन्द्र वरिपरि घुमायो।
ब्रुनोले १ 1575 मा पहिले नै सोचेको थियो कि ब्रह्माण्डमा अरु धेरै ग्रहहरू थिए जस्तै पृथ्वी र सूर्यजस्ता अन्य विशाल ताराहरू थिए। उनले पुष्टि गरे कि त्यहाँ अरू धेरै ग्रहहरू छन्। स्याटर्न सूर्य वरिपरि घुम्दै। पछि, को खोज पछि यूरेनस, नेप्च्यून y प्लूटो १1871१ मी १1846 र १ 1930 XNUMX०, क्रमशः यो गलत थियो भनेर देखाइयो।
ब्रुनोको समाजमा समस्या यो थियो कि उनी आफ्नो विश्वासलाई वैज्ञानिक डाटा र प्रमाणमा आधारित गर्दैनन्। यसको विपरित, ऊ धार्मिक विश्वासको बारेमा सोच्दै थियो र यही कारण थियो कि उनलाई अन्वेषणको क्रसहेर्समा नहोउन्जेल समस्या झेलिरहेको थियो। विधर्मीको आरोप पछि उनी १ he1586 मा पेरिस छोड्न बाध्य भए। उनले यसमा असंख्य लेखहरू लेखे उनले चर्चका अधिकारीहरू र सदस्यहरूलाई अपमान गरे केवल आफ्ना विचारहरूको पुष्टि गर्न।
पेरिस छोडेर उनी जर्मनी गए जहाँ उनले लुथरनवादमा शरण लिए। तिनीहरूले पनि उहाँलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाले।
जिओर्डानो ब्रुनोको अन्त्य
निस्सन्देह उसको जीवनको सबैभन्दा खराब गल्ती १ 15 वर्ष छोडेर इटाली फर्कनु हो। र यो यो हो कि उनलाई महान जिओभन्नी मोसेनिगोले धोका दिए जुन ब्रुनो उसको शिक्षक हुन् भन्ने बहानामा, उनले उसलाई आफ्नो घरमा निम्त्याए र यही ठाउँमा उनले उनलाई भेनेशियाली अन्वेषणमा दिए।
जब ऊसंग सम्बन्धित भएको थियो, उसले घमण्डी र अहंकारलाई पन्छायो कि उसले यी सबै वर्षहरू थियो र निर्णायकको राम्रो व्यवहार गर्‍यो। यद्यपि केहि चरणहरू पछि जान ढिला भयो। फैसला यो थियो कि उसलाई सार्वजनिक रूपमा ईन्क्वायसनको हातमा खम्बामा जलाइएको थियो। यद्यपि उनले दावी गरे कि उनको प्रचार तिनीहरू धर्म थिएनन्, तर दर्शन, उनको खम्बामा मृत्यु भयो, १ cre०० मा उनको दाहसंस्कार गरियो।
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, सत्यका साँचो प्रचारकहरूलाई चर्चले इतिहासको बखत क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको छ। मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईं जियर्डानो ब्रुनोको जीवनको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » जिओर्डानो ब्रुनो